Ganacsatada Alaab-qeybiyeyaasha iyo Warshadda | Soo-saareyaasha Ganacsiga Shiinaha
AngelBiss waxay kaloo bixisaa nooc kasta oo kale oo adeeg daryeel caafimaad ah.
Haddii aad tahay COPD, ama aad leedahay astaamaha soo socda, sida habacsanaanta xagga neefsashada, khuurada iyo cilladda hurdada ee hurdada. AngelBiss waxay ku siin kartaa aaladda neefsashada guriga - Auto CPAP / BIPAP, taas oo hagaajin doonta shaqada neefsashada si ay u ilaaliso lahaanshaha marinka hawada, iyo inay si caadi ah u neefsato.
Haddii aad guriga ku haysatid oday ama bukaan-socod dhiig kar ah, kormeeraha cadaadiska dhiigga aad looma baahna. Aad ayey ugu habboon tahay in lala socdo caafimaadka qoyskaaga. AngelBiss waxay leedahay seddex nooc oo alaab ah oo aad dooratay: Xalka Kormeerka Cadaadiska Dhiigga Sare, Xakamaynta Cadaadiska Cadaadiska Dhiigga ee Curcurka iyo Kormeeraha Dhiigga Farta.
Haddii aad qabtid hargab, qufac, ama hungurigu kugu xanuunayo, rhinitis, qumanka, ama neefta, waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho daaweynta neefsashada ee isku-buufinta.
Markaa waxaad u baahan doontaa Qalabka Tirtiran ee Nebulizer, AngelBiss ayaa ku qancin doona baahidaada. Keliya kuma ekeynin nebulizer cufan dadka waaweyn, laakiin sidoo kale cunug leh noocyo kala duwan.
Haddii aad rabto, waxaad sidoo kale ka heli kartaa heerkulbeeg caafimaad oo elektaroonig ah buugga alaabta ee AngelBiss. Waxay ku jirtaa tayada ugu fiican iyo qiimaha wanaagsan.
Wixii su'aalo dheeraad ah ama macluumaad ah ee ku saabsan AngbelBiss, fadlan nagala soo xiriir info@angelbisscare.com.
Kormeeraha cadaadiska dhiigga elektarooniga ah, wuxuu guud ahaan qaataa tiknoolajiyada elektiroonigga ah ee cabbiraadda cadaadiska dhiigga oo wuxuu adeegsadaa cadaadis elektaroonik ah iyo dareemayaal garaaca wadnaha si loo ogaado calaamadaha cadaadiska iyo garaaca wadnaha, oo loogu muujiyo qaab dijitaal ah si loo muujiyo cadaadiska dhiigga ee dhiig-karka, dhiig karka diastolic iyo heerka garaaca wadnaha. sidoo kale wuxuu leeyahay bandhig LCD iyo microcomputer xakameyn otomaatig ah. Waxay si dhakhso leh oo sax ah u cabbiri kartaa dhiig karkaaga iyo garaaca wadnahaaga. Xitaa waxaad si joogto ah u hubin kartaa cadaadiska dhiiggaaga iyo garaaca wadnahaaga guriga wakhti kasta.
Nebulizer oo Tifaftira Caafimaad
Nebulizer-ka caafimaad ayaa inta badan loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cudurada neefsashada ee sare iyo hoose oo kala duwan, sida hargab, qandho, qufac, neef, dhuun xanuun, xiiq, rhinitis, boronkiito, pneumoconiosis iyo cuduro kale oo ku dhaca hawo mareenka, bronchi, alveoli, iyo laabta xabadka. . Neefsashada daaweynta neefsashada waa hab daaweyn muhiim ah oo wax ku ool ah ee daaweynta cudurada neefsashada. Qalabka nebulizer ayaa loo isticmaalaa in lagu qiyaaso dawada dareeraha ah ee ku jirta qurubyo yaryar, daawaduna waxay ku dhacdaa marinka neefsashada iyo sambabada iyadoo la neefsanayo neefta, si loo gaaro daaweyn aan xanuun lahayn.
Waxyaabaha kale ee Qalabka Neefsashada
Qolka haynta ee Valve waa nooc ka mid ah noocyada kala-goysyada oo ay ku jiraan hal-waalka hal afkiisa. Qalabkani wuxuu sameeyaa wax ka badan inuu bixiyo "meel" u dhexeeya afkaaga iyo dawada. Waxay sidoo kale dabin ku qabtaa oo haysaa dawadaada, taas oo ku siinaysa wakhti aad ku qaadato neef gaabis ah oo qoto dheer. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku neefsatid dhammaan daawada. Hal waalka oo hal dhinac ah ayaa kaa joojinaya inaad si shil ah tubada ugu neefsato. Qolal badan oo waardiyeyaal ah ayaa lagu dhejiyaa gudaha iyada oo leh daahan ka-hortagga maqaarka kaas oo ka caawiya in daawadu ku dhegto dhinacyada qolka.
Pulse Oximeter wuxuu la socon karaa buuxinta oksijiinta dhiigga iyo xuduudaha garaaca wadnaha. Oo waxaa jira shaxanka garaaca wadnaha garaaca wadnaha. Waxayna alson u leedahay shaqo xirid otomaatig ah kadib qiyaastii 8 ilbidhiqsi markii aysan jirin wax calaamado ah. Mashiinka wuxuu socon karaa 20hours. Waxa kale oo ay leedahay muujinta alaarmiga danab hooseeya.